Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul Oru ngo? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulEkrem İmamoğlu: Kanal İstanbul Oru ngo?
11 / 12 / 2019 34 Istanbul, General, Channel Istanbul, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Onye isi obodo nke Obodo isi obodo Istanbul Ekrem İmamoğlu kwuru okwu na “vallọ Ọrụ Naval” a na-eme na emume 564 nke “Tersane-i Amire kuruluş. N'ikwupụta echiche ya gbasara oru ngo a "Kanal Istanbul", Imamoglu kwuru, "Abụbeghị m onye ekwensu ntị na ndụ m. Anyi ekwu okwu, bro. Otu onye enweghi ike ikwenye m, bro. Sayensị na echiche ga-eme ka m kwenye. Agaghị m agbagha ihe ọ bụla sayensị na ihe kpatara ya. Ọ sịrị, mba anyị agaghị aga. İmamoğlu gosipụtara njikọ nke mgbazinye na Kanal Istanbul na okwu ndị a: “knowma ihe mbụ ọ bụ? Ihe oru ngo agwaetiti 3 na Marmara. A ga-eme ka olulu si n'ebe ahụ pụta, Bakirkoy, Avcilar ga-eguzobe n'ihu agwaetiti Büyükçekmece 3. A ga m agwa gị karịa? BİMTAŞ dị na ụlọ ọrụ anyị. Emego oru, a na-atụnye obodo n’agwaetiti ndị ahụ, a kọwapụtara ma webata ụlọ ọrụ Europe na ụlọ ụlọ mba ụwa. Gịnị ka ọ bụ? 2-3 ga-ere Villas na agwaetiti ndị ahụ maka nde kwuru nde. Legha anya na mkpa nke Istanbul
Obodo Obodo Obodo Istanbul (IMM) haziri “Naval Workshop” na ncheta 564 nke “Tersane-i Amire kuruluş. City Lines Inc. Ndị niile sonyere na mpaghara ahụ sonyere na ogbako ahụ haziri na Haliç Shipyard nke General Directorate kwadoro. Okwu mbu nke Şehir Hatları A.Ş mere. Onye isi njikwa Sinem Dedetaş. Mgbe Dedetaş İmamoğlu were igwe okwu. N’ịhụta ịdị mkpa çgbọ mmiri Haliç ebe e mere emume a, İmamoğlu kwuru, “Nke a bụ otu ọrụ Fatih Sultan Mehmet guzobere afọ abụọ ka mmeri ndị Istanbul oge ochie nyere anyị. Ọzọkwa, anyị na-echeta ekele. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nọ na çgbọ mmiri Haliç ebe 564 na-eme ncheta ya. Anyị nọ n'ọdụ ụgbọ mmiri kachasị ochie n'ụwa, otu n'ime ụlọ mbụ nke Istanbul anyị mgbe mmesịrị.
"Bosphorus bụ otu n'ime ngọzi ndị kasị ukwuu n'ụwa"
N’inye ihe atụ banyere akụkọ mbupu ụgbọ mmiri Istanbul n’okwu ya, İmamoğlu kwusiri ike na ọ na-ekele onye ọ bụla rụrụla ọrụ na Haliç Shipyard. İmamoğlu kwuru, ucu Dika mmeputara ebea; Site na ụlọ ọrụ Hayriye ferries, enwere ikike njem njem nke 18 n'oge gara aga. Onu ogugu a gosiputara na oge njem ụgbọ mmiri bu ihe di nkpa na Istanbul. ” N'ịkọwa obodo Bosphorus dị ka otu n'ime nnukwu ngọzi ụwa, İmamoğlu kwuru, "Bosphorus agbakwunyebeghị ọmarịcha ihe okike na ọdịdị ala anyị na Istanbul, kamakwa ọ gbakwụnyere nnukwu uru na njem ụgbọ mmiri. Ọbụna mgbe e wusịrị àkwà mmiri ndị ahụ, ọbụlagodi site na 2000, ụgbọ mmiri nwere oke òkè na njem ụgbọ mmiri n'obodo, na pasent 10. Taa, ọnụego ya dị ala karịa pasent 4. N'ihi ya, taa, na nkezi, naanị ihe dị ka otu puku ụmụ amaala 800 na-ahọrọ njem site n'oké osimiri. Ekwesịrị m ikwu na 25 enwebeghị ọganihu ọ bụla na mpaghara a maka afọ, mana ahụtala ọdịda. Ugbu a anyị emeela onwe anyị ihe mgbaru ọsọ ịlaghachi na pasent 10, anyị na-aga n'ihu. ”
“MARA ANB MASR MAS SB MASR MU SMS ỌR MU
Imamoğlu kwuru na enweghi ike iji ụgbọ njem ụgbọ mmiri na Istanbul ebe enwere ezigbo okporo ụzọ. “Karaköy Ọwara, nke bụ otu n'ime ụzọ ụgbọ ala ụwa mbụ, ka etinyere n'obodo a; mana n'aka nke ọzọ, anyị agaghị enwe ike iru netwọ ụzọ ụzọ ụgbọ oloko nke ga - erute nde mmadụ 16. N’ezie, nleghara anya na -adịghị mma nwere nnukwu nsogbu n’iru iru ebe a. Mana nke kachasị, ọ bụrụ na enyere ụmụ mmadụ aka karịa ụgbọala, anyị ga-abụ ọkwa dị elu na njem ọha na eze. ” Todaym İmamoğlu kwuru, sị, "Taa, anyị na-anwa ịhazi usoro njem ụgbọ ala nke ngwa ngwa, nke a pụrụ ịdabere na ya, nke dị ọnụ ala, nke dịkwa ọnụ ala. Wayzọ ime nke a bụ site na njem ọha na nnabata nke usoro ahụ dum. Ekwesịrị itinye bọs, metro, tram na ọdụ ụgbọ mmiri n'usoro wider. Anyị ga-eme usoro niile dị mkpa iji mee ihe ndị a ozugbo enwere ike
KWU ANY IM NA-EBUP CHTA CHANNEL ISTANBUL AN
"A ga-ekwukwa okwu banyere ọwa Channel Istanbul," kwuru İmamoğlu, "Ekwuru m otu okwu na nzuko omeiwu. 'Dị ka nwa amaala Ekrem İmamoğlu, dị ka nwa amaala nke nna 3 nke ụmụ, achọghị m ịmanye Kanal İstanbul n'ụzọ ọ bụla, ajụrụ m.' Ihe a di nkpa. Isiokwu anyị na-ekwu maka ya bụ isiokwu ga-ebu Istanbul ruo ebe ọzọ ga-agbanwe ya kpamkpam. Yabụ, arụmọrụ, mkpa nke ụmụ amaala Istanbul kwesịrị ịtụle zuru ezu. Ahụrụm na oru ngo a, nke eweputara dika nkwa nhoputa ndi ochichi na 2011, ekwuputaghi ma obu okwu ekwuputara ya. Lee, nke a bụ mmanye. A bụ m onye na-azụ ahịa, echem siri ike. Echeghị m na 75 bụ ijeri, ọ karịrị ọnụmaahịa ndị a. Izu ụka izizi nke Jenụwarị ga-eme na 'Kanal Istanbul Workshop'. Ekwesiri icheta ihe ọ bụla ị na-eme na Istanbul nke ọma. Echere m na ọdịdị ala nke Istanbul enweghị ike ịnwe ụdị mgbanwe a. O nwere ebumnuche sayensi ..
“Ihe A abụghị Ihe Ọchịchị.”
Imamoglu dọrọ aka ná ntị na mbibi nke 135 nde square kilomita nke ala ubi naanị bụ ihe ziri ezi ,,, “Mmetụta Marmara na Oké Osimiri Ojii… Ọnọdụ nde mmadụ 8 bi n'agwaetiti… gịnị? You jikọọ akwa ogologo xNUMX 8-300. N'ihi gịnị? Ekwuru na; mmụba n'ụgbọ mmiri, mmụba n'ụba ụgbọ mmiri n'ihi mmepe nke teknụzụ ma gbochie ụzọ ụgbọ mmiri na-ebu ihe ndị dị egwu dị ka mmanụ site na Bosphorus. You nwere ike ileba anya n’ihe kpatara ya? Pasent 350 abaghị uru. Ọnụ ọgụgụ ụgbọ mmiri na-agafe na Bosphorus na-ebelata. Site na ngọpụ nke mmiri a, 90 na-emebi ụdị akụkọ puku afọ a na ihe dị otú ahụ, na-agụghị akụkọ EIA, 10 nde 1 puku mmadụ ka a na-ekepụta na ọwa. Know mara, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri? Ihe omumu ohuru ohuru? 150 elu ụwa dị nso otu ijeri cubic, dị ka ụlọ nke 1,5 ijeri cubic mita. Number ụgbọ mmiri agafe mkpagide na Istanbul, Turkey mbelata. Ọ na-ekwu maka ihe iyi egwu tanker. O doro anya otu esi etinye ego dị mkpa na pip pip mmanụ. Enwere ike itinye ego dị iche iche ”.
“Ebe a bụ amara nke Chineke”
Imamoglu kwuru na 10 na-anwa imebi ọdịdị ala mara mma nke puku afọ na ngọpụ nke mmiri wee sị: göre dịka akụkọ EIA si kwuo, ha na-abịa n’ihu anyị n’agụghị agụ. Anaghị m ekwu, Ministrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọha na Ọha na-ekwu. A na-ekepụta nde kwuru nde mmadụ 1 dị gburugburu kanaal. Knowmara na anyị kpọrọ 150 nde 1 puku, ọ ghọrọ 150 nde. Know mara nke ọma. Gini bu oru ngo a? Kersgbọ mmiri, ụgbọ mmiri. Nke a bụ ọrụ mgbazinye ọhụrụ? Ngwongwo ogugu nke 2 cubic nke cubit, dika ulo 1,5 ijeri- ihe aga-ejuputa na Oké Osimiri Ojii. Aga m egosi gị ọrụ ha na Jenụwarị. Know ma ihe izizi ya? Ihe oru ngo agwaetiti 2 na Marmara. A ga-eme ka olulu si n'ebe ahụ pụta, Bakirkoy, Avcilar ga-eguzobe n'ihu agwaetiti Büyükçekmece 3. A ga m agwa gị karịa? BİMTAŞ dị na ụlọ ọrụ anyị. Emego oru, a na-atụnye obodo n’agwaetiti ndị ahụ, a kọwapụtara ma webata ụlọ ọrụ Europe na ụlọ ụlọ mba ụwa. Gịnị ka ọ bụ? 3-2 ga-ere Villas na agwaetiti ndị ahụ maka nde kwuru nde. Lee anya na mkpa nke Istanbul. Ọ dị mma, nwoke a nwere ike ime nke a na Dubai. Ọzara, ala ịkpa! Nwere ike. Nke a bụ ngọzi si n’aka Chineke. Emetụla ya aka, anyị anaghị emetụ ya aka. Onweghi ụdị ihe a. Anyị na-ekwu maka obi ụtọ ndị mmadụ. Ekwebeghị m ekwensu na-ekwu okwu na ndụ m. Anyi ekwu okwu, bro. Sayensị ga-eme ka m kwenye. Otu onye enweghi ike ikwenye m, bro. Sayensị na echiche ga-eme ka m kwenye. Agaghị m aga n'ihu ihe ọ bụla sayensị na ebumnuche anaghị ekwenye. Mba anyị agaghị aga. Ndokwa na uche na sayensị anaghị ekewapụ gị n'ụzọ ziri ezi. Ma ọ bụrụ na ị na-eso onye ahụ, onye ahụ nwere ike ịkpọga gị ebe ọ bụla. Mmadu, Ihe m na ekwu bu na etinyem aka, ya na onye ozo. N'akụkụ a, nke a abụghị okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nke a abụghị isiokwu n'ihi na mmadụ rịọrọ maka ya. Naanị n'ihi na mmadụ achọghị ya abụghị okwu. Nke a bụ ọrụ echiche na sayensị. ”
Ekrem İmamoğlu Họpụtara, Ga-emepụta Channel Istanbul Project?
Ekrem İmamoğlu: 'Enweghị m echiche dị mma banyere ọwa Istanbul'
Ekrem İmamoğlu Said Channel İstanbul bụ oru mgbazinye
Ndị ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri Istanbul na-ekwupụta na ha bi na Istanbul
Ekrem Imamoglu nyere ntụziaka maka ego
Baajị ndị ụgbọ si Ekrem İmamoğlu
Marmaray si Ekrem İmamoğlu pụọ
İmamoğlu: Achọghị Kanal İstanbul Project
İstanbul Bursa İzmir Motorway Project Achọtara Housinglọ
Nzaghachi Channel Channel si Imamoglu nye Erdogan: Ọ bụghị Otu Onye Maara Ihe Nde mmadụ 16
İmamoğlu: Nyochaa Ngwongwo Ngwongwo na Canal Istanbul Route
Channelmamoğlu Ọwa Tellgwa Ikikere Istanbul
İmamoğlu: Citizmụ amaala ọ bụla kwesịrị ikwenye ọfụma maka ọhụụ Istanbul!
Marinelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmiri na Istanbul
Netwọk Metro nke Istanbul
Projects Projects of Istanbul
Ọdụ Ọwa Istanbul
Report Channel Istanbul EIA